Qarax Labaad oo Askar Badani ay ku Dhimitay oo Maanta ka Dhacay Ex-Contarool Afgooye (VIDEO)
December 15, 2016 – Waxaa maanta qarax miino oo qasaarooyin kala duwan dhaliyay uu ka dhacay duleedka Muqdisho, gaar ahaan Isgooska Ex-Contarool Afgooye ee magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in geed ku yaala Ex-Control Afgooye oo ah goob buush ah oo laga cunteeyo in qarax miino lagu aasay lana qarxiyay markii ay goobta isugu yimaadeen ciidamo dowladda ka tirsan. waxaana Maqaayada inta badan tagi jiray dad shacab ah iyo Ciidamo katirsan Dowladda.
Inta la xaqiijiyay Qaraxa lagu qarxiyay Maqaayada waxaa ku geeriyooday lix qof oo isugu jira Shacab iyo ciidan, waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay tiro kale, kuwaa oo loola cararay xarumaha caafimaadka.
Afhayeenka gobolka Banaadir ayaa sheegay in qaraxa Miino lagu qarxiyay maqaayada kutaala Ex-Contarool Afgooye ay ka dambeeyeen ururka Al Shabaab, waxa uuna sheegay dadka qaraxaasi wax ku noqday in ay shacab iyo askar isugujreen.
December 16, 2016 tuugahaladilo2015